DHAGEYSO:Saddex qof oo ku dhimatay dhisme ku dumay Kiambu | Star FM
Home Wararka Kenya DHAGEYSO:Saddex qof oo ku dhimatay dhisme ku dumay Kiambu
DHAGEYSO:Saddex qof oo ku dhimatay dhisme ku dumay Kiambu
Wararka naga soo gaaraya ismaamulka Kiambu ayaa sheegaya in la xaqiijiyay dhimashada saddex qof oo ka mid ahaa howlwadeeno gacanta ku hayay dhismaha guri ka kooban 5 dabaq oo soo dumay shalay.
Dhacdadan ayaa laga soo tabiyay deegaan baarlamaneedka Kiambaa ee dowlad deegaankaasi.
Barasaabka Kiambu James Nyoro ayaa sheegay in weli la raadinaya mulkiilaha dhismaha soo dumay .
Waxaa uu xusay in aan loo hoggaansamin amar lagu joojiyay dhisidda gurigaas ka hor inta uunan burburin.
Wararka ayaa intaa ku daraya in hadda ay socdaan howlaha samata bixinta ee lagu raadinaya labo howlwadeen oo la rumeysan yahay inay weli ku hoos xanniban yihiin burburka.
Sagaal qof oo dhaawacmay oo la soo badbaadiyay ayaa hadda xaaladooda caafimaad lala tacaalayaa.
Xildhibaanka deegaanka Kiambaa Njuguna Wanjiku ayaa dowladda gaar ahaan maamulka qaabilsan kormeerka dhismooyinka baaq u diray si mustaqbalka looga hor taggo dhibaatada shalay dhacday oo kale
Previous articleMadaxweynaha dalka oo Kabete ka dhagax dhigay dhismaha isbitaal qaran
Next articleRuto oo ku gacan seyray in Matiang’i su’aallo laga weydiiyo ciidamadii la kala beddelay